Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Fitsangatsanganana amerikana: nanokatra indray fanapahan-kevitra hendry i Angletera
Airlines • Airport • Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny tena izy dia tsy misy mahasamihafa ny amerikanina vita vaksiny sy ireo vita vaksiny any UK, EU ary Canada.
Indostria fanondranana ny dia iraisam-pirenena, ary ny fifandanjan'ny varotra dia lavitra no nankasitraka an'i Etazonia.
Ny sisin-tany mihidy dia tsy nanala ny fiparitahan'ny karazana delta.
Ny fanakatonana ny sisintany hatrany dia nanemotra kokoa ny fiverenan'ny asa amerikanina ary fanarenana ara-toekarena lehibe kokoa.
US Travel Association Filoha lefitra mpanatanteraky ny raharaham-bahiny sy ny politika Tori Emerson Barnes no namoaka ity fanambarana manaraka ity momba ny vaovao fa Angletera tsy ho ela dia handray ny Amerikanina vita vaksiny tanteraka:
“Nanapa-kevitra tamim-pahendrena ny mpitondra fanjakana britanika amin'ny fanokafana indray an'i Angletera mba hanao vaksiny mpandeha avy any Etazonia. Fotoana izao hanaovan'ireo mpitondra amerikana zavatra toy izany ary hametrahany fandaharam-potoana hanokafana ny sisintanintsika — ary amporisihinay izy ireo hanomboka amin'ireo mpandeha vaksiny avy any UK, EU ary Kanada. Ny tena izy dia tsy misy mahasamihafa ny amerikanina vita vaksiny sy ireo vita vaksiny any UK, EU ary Canada.
“Indostria fanondranana ny dia iraisam-pirenena, ary ny fifandanjan'ny varotra dia lavitra no nankasitraka an'i Etazonia. Ny sisin-tany mihidy dia tsy nanala ny fiparitahan'ny karazana delta, raha ny fanakatonana ny sisin-tany kosa dia mbola nanemotra ny fiverenan'ny asa amerikana sy ny fanarenana ara-toekarena lehibe kokoa.
“Ho an'ireo mpitondra fanjakana amerikana dia hoy izahay: Andao hametraka drafitra iray — izao — tahaka ny nataon'ny governemanta britanika sy kanadiana ary hafa, hanombohana ny fisokafan'ny dia iraisam-pirenena.
“Ho an'ny rehetra, hoy izahay: Araho ny antso ataon'ny manampahefana misahana ny fahasalamana ary mahazo vaksinina. Io no lalana haingana indrindra mankany amin'ny ara-dalàna ho an'ny rehetra. ”